Oolmaa jabaa Artiist Laggasaa Abdii – Fana Broadcasting Corporate
Oolmaa jabaa Artiist Laggasaa Abdii
Finfinnee, Gurraandhala 25,2011(FBC)- Jabaa ofii kabajuu, beekamtii laachuu fi goota baafachuun ummata cimaa uuma.
Siidaan Artiist Laggasaa Abdii Birrii kuma dhibba 3n Qiddist Sillaaseetti ijaarrame Sanbata darbe; Gurraandhala 23,2011 ebbifameera.
Artiist Laggasaa Abdii Sanbata; Onkololeessa 11,2011 kan boqate yammuu ta’u, sirni awwaalchi isaatis Dilbata; Onkololeessa 12,2011 Kaatedraala Sillaasetti raawwatamuun isaa ni yaadatama.
Aartii Oromoo fi Ityoophiyaa keessatti Artiist Laggasaan maasinqoo tabachuudhan bakka olaanaa qabu.
Oolmaa Artiist Laggasaan aartii, seenaa, aadaa fi duudhaa Oromoo gabbisuu keessatti qabu yaadachuuf abbaan qabeenyaa Oromoo obbo Dinquu Dayaasaan siidaa Birrii kuma dhibba 3 hojjechiisaniifiru.
Artiist Laggasaa Abdii; maatii isaatif ilmi tokkichi bara 1927 Salaalee Yaayyaa Qacamaatti abbaasaa obbo Abdii Daadhii fi haadhasaa aadde Foollee Guddataarraa dhalate.
Laggasaa Abdii hiriyaa abbaasaa kan ta’e Wasanuu Diidoo yennaa masiinqoo taphatu argee, dandeettiisaatin booji’amee maasinqoo taphachuu kan baratee fi umriin isaa gara waggaa digdamaa yoo ta’u, Wasanuu wajjin gara Finfinneetti dhufuun mana Tiyaatiraa Hagar Fiqiriitti sirbuu kan eegale ta’uu ibsaa tureera.
Laggasaa Abdii Tiyaatiraa Hagarfiqir, Tiyaatira Biyyaalessaa, Tiyaatiraa fi Aadaa Magaalaa Finfinnee, Orkeestiraa Poolisii, Kibirzabanyaa fi hoteela Hiiltan keessatti hojjeteera.
Artiistii hangafti kun sirboota afaan Oromoon Ya Boonaa Yaa Boonaa, Jijiituu, Iyya handaaqqoo, koottu yaa jigaakoo fi kan birootin beekamaadha.
Laggasaa Abdii fakkeenyummaa Wasanuu Diidoo hordofuun bara Afaan Oromootiin sirbuun haaturuutii haasawuun akka qaaniitti lakkaahamaa turetti, bara namni maqaasaa maqaa Afaan Oromoorraa Afaan biraatti jijjirachuuf dirqamaa turetti dhiibbaa keessa darbuun yeroo waggoota jaatamatti shallagamaniif tajaajiluun guddinaa fi beekamuu aadaa Oromoof shoora ol’aanaa kan taphatedha.